Umhla My Pet » 5 Imibuzo Ufanele Cela On The Umhla First
ngokuthi Samantha eneentsekelezane
5 Imibuzo Ufanele Cela On The Umhla First
ukubuyekezwa: Sep. 18 2020 | 2 min ukufunda
imihla kuqala kunokuba kuba nodliwano, kodwa ubomi bakho uthando. Ikwenza wena Wayesoyika nemincili. Kwaye ngamanye amaxesha onokufumana wena ukuze ningagqitywa iingcinga umhla wakho, ukuba ekupheleni ngomhla, uyayiqonda into yokuba ndiye ndafunda nto ngazo.
Musa ukuvutha, kukho isisombululo kule.
ezi 5 mibuzo kuya kuqinisekisa ukuba uhambe ukusuka kumhla wokuqala nisazi ngokuzithemba ukuba uza kuba nomdla kuphinda ubabone.
Yintoni into oyithandayo ukwenza?
Le enye elula ukususela kakhulu kuthi Ndiyakuthanda ukuthetha siziyaleze. Oku kuzakuvumela ukuba buguqulelwe ingqalelo ukuya kumhla wakho uze ufunde ngokwenene oko kubenza bonwabe. Ngokuqhelekileyo xa ubuza lo mbuzo, Kwakhona umhla wakho wonityhilela nangazithandiyo zabo. Uqaphele ezincomekayo kwaye uthabatha - obufihlwe iimpendulo zabo ingaba licebo elikhulu ngomhla wesibini ngokusekelwe iimfuno zabo.
njani na ukuba ixesha elinye?
Oku kunokubonakala ngathi umbuzo ngulomfana, kodwa ke kubalulekile. Ukwazi ukuba umhla wakho okhetha enye kuthelekiswa ukuba nabo enye kodwa sijonge ngomdla, luya kukwazisa ukuba utyala ixesha lakho ngobulumko kulo mhla wokuqala. Ufuna ukuqiniseka ukuba iinjongo ulwalamano lwakho lifane. Into yokugqibela ofuna kukuba bobabini ukuba ufuna izinto ezahlukileyo ukuze bafumanise oku imihla emininzi kamva.
Ingaba unayo nayiphi na abantwana?
Ukubuza lo mbuzo enkulu ngenxa kwakhona, wena ngoku uziguqulele lugxininise ukuya kumhla lwakho. Nawe ngokwakho ngokucofa iingcinga zabo intsapho. Kusenokwenzeka nokuba zibonisa ukuba ekugqibeleni bangathanda ukuqalisa iintsapho zabo. Lo mbuzo uza kukunika kakhulu ukuthetha ekubeni kusoloko unebali ezingqonge isihloko oyithandayo.
Yintoni umqondiso wakho?
Le igqala kodwa odie. Yinto Yingcamango elungileyo ukuba ufuna ukubuza lo mbuzo ekuqaleni kumhla. Abantu zincamathele imiqondiso yabo ezulu kwaye nokuba abakholelwa ngeenkwenkwezi, zisavuliwe ngokupheleleyo ukuva izinto ozaziyo imiqondiso yabo. zodiac yenye ukwandiswa thina njengabantu akukho nto simthanda ngaphezu ukufunda izinto ezintsha ngathi.
Yintoni oyilindeleyo kwiqabane?
Lo umbuzo obalulekileyo umhla wokuqala. Yinto eninzi daters ukuphepha ukubuza kuba abafuni ukoyikisa omnye umntu kude. Kodwa ngokubuza lo mbuzo kuya ingqiqo kuhlobo abantu ukutsala amehlo umhla wakho kwaye apho agcina xa kuthelekiswa. Zama ukuba sigwebe gqitha iimpendulo zabo ukuba akuvumelani nabo. Oku kusekelwe iimfuno zabo kwaye kufuneka yamkelwe hlobo. Emva kokuba lo mbuzo wabuzwa, niya kwazi ngokuqinisekileyo ukuba lo mhla wokuqala inamandla lisiba into eninzi kakhulu.
Ezine Iintlobo babantu Women Go Kuba